It is me. Ko Niknayman.: ဖျက်မြင်း။
မြန်မာပြည်တွင် ဟိုတချိန်က မြင်းစီးအပြေးပြိုင်ပွဲများ ရှိခဲ့ပါသည်။ တရားဝင် လောင်းကစားပွဲကြီးများဖြစ်ပါသည်။ ယခု ကျိုက္ကစံအားကစားကွင်းကြီးမှာယခင်ကမြင်းပြိုင်ကွင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံအတော်များများမှာ ယခုအချိန်အထိ မြင်းစီးပြိုင်ပွဲများကို လောင်းကြေးဖြင့် ပြုလုပ်နေကြတုန်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့မြင်းပြိုင်ပွဲများတွင် “ ဖျက်မြင်း ”ဟူ၍ ရှိတတ်ကြပါသည်။
ဖျက်မြင်းဆိုသည်မှာ ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမ ရမည်ဟုခန့်မှန်းနှိုင်သော မြင်းကို ပထမ မရနှိုင်အောင် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် နှောက်ယှက်ရသောမြင်းကို ဖျက်မြင်း ဟုခေါ်ပါသည်။ ဖျက်မြင်းမှာ သူဖျက်ချင် သောမြင်းကို နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးရန်သာ တာဝန်ရှိပါသည်။ သူကိုယ်တိုင် ပထမ ရရန် ကြိုးစားသော မြင်းမဟုတ်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကြေညာချက်ကို ကန့်ကွက်ကြသော အဖွဲ့ များသည် “ဖျက်မြင်း” များသာဖြစ်ကြပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဒေါ်စု၏ကြေညာချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသူအားလုံးအတွက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ပြည့်စုံနိုင်သော၊ လေးနက်၍အဓိပ္ပါယ်ဝပြည့်သော၊ အစွန်းမထွက်ဘဲ စိတ်စေတနာ သန့်ရှင်းသော သဘောထားများ ကိုသာ ထင်ဟတ်နေသည့် ကြေညာချက်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ သော် “ အပြစ်တင်သောသူကိုဆင်ခြေပေး၍မရ” ဆိုသည့် စကားရှိသည့်အတိုင်း၊ သိကြားမင်းကိုယ်တိုင် နွားရောင်ဆောင်ပြသော်မှ အမြီးနဲနဲတောင်းနေသည်(တိုနေသည်) ဟု ပြောဆိုသော လူစားများပင် ရှိတတ်ကြသည်မှာ လောကဓမ္မတာဟုပြောရမှာပင် ဖြစ်ပါသည်။
ယခု ကိစ္စမှာတိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်ကံကြမ္မာဖြစ်နေသည့်အတွက် အလွန်အရေးကြီးသော ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ကန့်ကွက်သူများ အနေနှင့်အလေးအနက်ထား၍စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
အဂတိကင်းလွတ်စွာတွေးခေါ်သင့်ပါသည်။ မိမိနှင့်အပေါင်းပါလူတစုအတွက် ဘယာဘေးကို
ကြောက်၍သော်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့ လိုအင်ဆန္ဒနှင့် မကိုက်ညီ၍သော်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်မည်စိုး၍သော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွှက်မှု့ အားလုံးသည် မှန်ကန်မှု့ 
ယနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကြေညာချက်အပေါ်ကန့်ကွက်သူများ၏ အကြောင်းပြချက်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်မည်ဆိုပါလျှင် “ကြေညာချက်သည် တခြားနိုိင်ငံရေး အဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ ပါတီတွေရဲ့ သဘောထားနဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက်ပါ ကိုယ်စားပြုဆွေးနွေးမည့် သဘောသက်ရောက်တဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်နေတာကြောင့်” ကန့်ကွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပါသည်။
ထိုသို့ ဆိုသည့်အတိုင်း “ ကိုယ်စားပြု ဆွေးနွေးမည့်သဘောသက်ရောက်သည့် အချက် ” ဆိုသည်ကို သေချာစွာ ရှာဖွေကြည့်ရှု့့တဲ့အခါမှာ “ ယခုကဲ့သို့အမျိုးသား ညီညွှတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ သွေးစည်းညီညွှတ်ရေးကို အထူးတလည်လိုအပ်နေသည့် အခါသမယတွင် အခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ အင်းအားစုများ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန္ဒသဘောထားများ၊ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ၏တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန္ဒသဘောထားများကို
တတ်နှိုင်သမျှကျယ်ပြန့်စွာ အစဉ်တစိုက်အလေးအနက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ကျမတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ ဤရည်မှန်းချက်ပေါက်ရောက်အောင်မြင်စေရန်အတွက် အပြုသဘော
ဆောင်သည့် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရန် ကျမ ပိုင်းဖြတ်ထားပြီဖြစ်ပါသည် ” ဆိုသည့် စာပိုဒ်ကို တွေ့ ရှိမှတ်သားမိပါသည်။
ကြေညာချက်ပါ ဤစာပိုဒ်၏ ဆိုလိုချက်များသည် အလွန်ပင်ရှင်းလင်း ပါသည်။ အလွယ်တကူနားလည်သဘောပေါက်နှိုင်ပါသည်။ သို့သော် ကန့်ကွက်သူများရှိနေသဖြင့်
“ ယခုကဲ့သို့အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ သွေးစည်းညီညွှတ် ရေးကို အထူးတလည်လိုအပ်နေသည့်အခါသမယ ” ဆိုသည့် စကားသည် ပြည်သူတရပ်လုံးက လက်ခံရမည့် စကားလား၊ ငြင်းပယ်ရမည့်စကားလား ဆိုတာ တကမ္ဘာလုံး၊ တနိုင်ငံလုံးက သိရှိအတည်ပြုပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။ ဇွတ်မှိတ်ပြီး ငြင်းရမည့် အချက်မဟုတ်ပါ။ ထို့ ကြောင့်
တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်အရေးကြီးနေသော အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါသမယ ဖြစ်နေသည်ကို
ဒုတိယအချက်အနေနှင့် ဤကဲ့သို့ အလွန်အရေးကြီးနေသည့် အခြေအနေ နှင့် အချိန်အခါမျိုးမှာ “ အခြားနိုင်ငံရေး အဖွဲ့ အစည်းများ၊ အင်းအားစုများ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန္ဒသဘောထားများ ” ဟု သုံးနှုန်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူမကိုယ်စားပြုနေသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်တခု အတွက်မျှသာ မဟုတ်ဘဲ န.အ.ဖ ပါ အပါအဝင် တနိုင်ငံလုံးရှိအဖွဲ့ အစည်းအားလုံးအတွက် အားလုံး၏အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန္ဒသဘော
ထားများအတွက် ကြီးမားသောစေတနာနှင့် ရည်ရွှယ်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု နားလည်သဘော
ပေါက်ရပါမည်။ ငါပိုင်သည်၊ ငါပြီးသည်ဟူသော ကိုယ်စားပြုသော၊ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်လိုသော သဘောထားလုံးဝမပါကြောင်း တွေ့ ရပါလိမ့်မည်။ သေသေချာချာ သဘောပေါက်အောင် ဖတ်ပြီး
တတိယအချက်မှာ “ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန္ဒသဘောထားများကို တတ်နှိုင်သမျှကြယ်ပြန့်စွာ အစဉ်တစိုက်အလေးအနက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ကျမတွင် တာဝန်ရှိပါသည် ” ဟုဆိုထားပါသည်။ ဤအချက်ကို ကန့်ကွက်သူများ အနေနှင့် သေသေချာချာ နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ လိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်
ဆိုသော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အတိုက်အခံအင်းအားစုများနှင့် ပြည်သူလူထုကြီးဘက်မှ ရပ်တည်ပြီး စစ်အစိုးရနှင့်စကားပြောရန် တဦးတည်းသော အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ် သည်ဟု မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးနှင့် ကမ္ဘာကပါ ရွှေးချယ်သတ်မှတ်လိုက်သောသူ ဖြစ်နေသည်မှာ ထင်ရှားလှပါသည်။ မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးနှင့်ကမ္ဘာကပါ ယုံကြည်မှု့ ရှိရှိဖြင့် ရွှေးချယ်သတ်မှတ်၍ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် နေရာမှနေ၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သူမဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်
ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို တာဝန်သိသိ၊ တာဝန်ရှိရှိ တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ကြေညာခြင်းသည် အလွန်မှ လေးစားထိုက်သောစကားပင်ဖြစ်သည်ဟု သဘောပေါက်ကြရပါမည်။
(ဤနေရာတွင် ဒေါ်စုနှင့် ဦးသန်းရွှေတို့ နှစ်ဦးတည်းဆွေးနွေးမှု့ လို့အမြင်
မတိမ်းစောင်းသင့်ပါ။ သူတို့ ကိုယ်စားပြုနေသော အဖွဲ့ ဝင်များနှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှု့ ဖြင့်ပြုလုပ်သော ဆွေးနွေးပွဲများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် “ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန္ဒသဘောထားများကို အလေးအနက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ကျမတွင်တာဝန်ရှိပါသည် ” ဟု သီးခြားထည့်သွင်းပြောဆိုခြင်းသည် လူမျိုးစုများအပေါ် အထူးပိုမို၍ လေးစားခြင်း၊ တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့် ထိုသူတို့ ၏ အကျိုးစီးပွားကို ဂရုတစိုက်ရှိနေသည့် အချက်ကို လေးနက်စေရန် ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု သဘောပေါက်ရပါမည်။ တိုင်းရင်းသားတို့ ၏ အကျိုးစီးပွားကို သူမ၏တာဝန်တခုအနေဖြင့် ဖေါ်ပြခြင်းသည် သူမ၏ ကြီးမားသောစေတနာကို ဖေါ်ညွှန်းနေသည် ဟု နားလည်ရပါလိမ့်မည်။
ကြေညာချက်ကို ကန့်ကွက်ကြသည့်အဖွဲ့ များ၏ ထောက်ပြချက် သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သူတို့ အဖွဲ့ များ၏ သဘောထားနှင့် အကျိုးစီးပွားကို ကိုယ်စားပြုဆွေးနွေးမည်ဟု သက်ရောက်နေသည့်အချက်များ ပါဝင်နေသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။
ဤသို့ဆိုလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သူမ၏ ဆွေးနွေးပွဲမှာ (ဥမမာ အားဖြင့် တ.စ.ည ပါတီ၊ ဦးအောင်ခန်းထီ၏အဖွဲ့ ၊ ဝ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ၊ DKBအ) စသည်တို့ နှင့် မသက်ဆိုင်ပါဟု ထည့်သွင်းပြောရတော့မှာလား စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ “ ဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီသို့” ရလဒ်ကောင်းတွေ ရရှိလာပြီဆိုလျှင် ထိုကန့်ကွက်သော အဖွဲ့ များနှင့် မသက်ဆိုင်ရ၊ မခံစားရလို့ ပြောရမှာလား စဉ်းစားကြည့််ကြပါ။ အခုလိုမျိုး အမျိုးသားညီညွှတ်ရေး၊ ရင်ကြားစေ့ရေးတွေ အရေးကြီးနေသည့်အချိန်၌ ညီညွတ်ရေး လမ်းစလေး မြင်စပြုနေချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သူမ၏တာဝန်ယူဆောင်ရွှက်ရမည့် အလုပ်တွင် စစ်အစိုးရအပါအဝင် မည်သည့်အဖွဲ့ အစည်းကိုမှ ဖဲ့ထားချန်ထား၍ လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကိုနားလည်ဖို့ လိုပါသည်။
ထို့ ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကြေညာချက်သည် တတိုင်းပြည်လုံး၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် မြန်မာပြည်မှာ မှီတင်းနေထိုင်သူအားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် စွမ်းအားရှိသမျှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်ဟု အခိုင်အမာကြေညာခြင်းဖြစ်သည်ဟု သဘောပေါက်ဖို့ လိုပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့် သူမ၏ သံန္နိဌါန်အတိုင်းအခိုင်အမာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ထပ်လောင်းအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါသည်။ သူမနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ ကိုလည်း ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါသည်။
သို့ သော် ကျွန်တော် ပထမ ပိုင်းရေးသားခဲ့သလို ဘယ်လိုပင်ကောင်းမွန်မှန်ကန်ပါစေ၊ ကန့်ကွက်သူများရှိတတ် မြဲဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူတို့ ကို “ ဖျက်မြင်း ” ဟု ကင်ပွန်းတပ် ရသည်မှာလည်း အကြောင်းရှိပါသည်။ ထိုသူတို့ သည် လောလောဆယ် စစ်အစိုးရကို ကြောက်နေရသူများ၊ အကျိုးစီးပွားဘက်များ ဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလည်း စစ်အစိုးရက စေခိုင်းသည့်အတိုင်း လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသူများဖြစ်ကြောင်းကို
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက မကန့်ကွက်ကြနှင့်ဟုပြောလျှင် ကန့်ကွက်ကြမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကို လူတိုင်း သိကြပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက မလုပ်လျှင်မဖြစ်တော့ဘူးဟု ယူဆပြီး လုပ်ရမည့်
ဤတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ သူ့ ဘက်က အသာစီးရရေးအတွက် မွေးထားသော “ ဖျက်မြင်း ” များကို သူ့ နေရာနှင့်သူ အလှည့်ကျ ထုတ်သုံးလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ ကြောင့် ဖျက်မြင်း အဖြစ်အသုံးချမခံကြတော့ဘဲ၊ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံး၏ အကျိုးစီးပွားကို ထောက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကမ်းလှမ်းထားသည့်အတိုင်း အတူတကွလက်တွဲလုပ်ဆောင်ကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည် ခင်ဗျား။
(ရေးသားသူ - ဦးဖိုးသာအောင် (နော်ဝေ)။
Posted by Ko Niknayman at 6:20 PM